UBAXELELA NJANI NGENTLONELO UMNTU ONGAMENYWANGA EMTSHATWENI - IINGCEBISO ZOKUCWANGCISA
Eyona Iingcebiso Zokucwangcisa Ngokuchanekileyo indlela yokuxelela umntu ukuba abamenywanga kumtshato wakho
Ngokuchanekileyo indlela yokuxelela umntu ukuba abamenywanga kumtshato wakho
Sukuba noxinzelelo-siyayilahla into emasiyithethe xa izinto zisiba nzima. IVASHstudio / iShutterstock.com
Ukuhlaziywa kuka-Mar 24, 2021
Ukucheba uluhlu lwakho lweendwendwe Ungangomnye wemisebenzi enzima kuluhlu lwezinto oza kuzenza. Izinto ezahlukeneyo zinefuthe ubungakanani bomtshato wakho , ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali ukuya kwindawo yakho kunye nombono wakho uphela. Kuba akusoloko kunokwenzeka ukumema wonke umntu owaziyo, nantsi indlela yokuthetha ngesidima kumntu ongamenywanga emtshatweni wakho ngakumbi ukuba bathatha kakhulu. Abahlobo abakude okanye oqhelene nabo banokukubeka kwindawo engathandekiyo ukuba bacela isimemo xa wawungacwangcisi ukwandisa esinye, yiyo loo nto sicebisa ukuba silungiselele iimpendulo ezimbalwa.
Nokuba usebenza kunye uhlahlo lwabiwo-mali olungqongqo okanye ufuna kuphela usapho olusondeleyo kunye nabahlobo emtshatweni wakho, kulungile ukuba uluthintele uluhlu lwakho lweendwendwe. Xa kuziwa kwizimemo, kuya kufuneka ubandakanye abantu ofuna ukubhiyozela nabo. Isinye isilumkiso sokuthathela ingqalelo, nangona kunjalo nabani na onegalelo kumtshato wakho Ngokwesiqhelo unezwi kuluhlu lweendwendwe, ngokwemiqathango yemithetho yomtshato yesiqhelo. Ukuba abazali bakho okanye abasebukhweni bayakunceda ekunyanzeleni umrhumo oyilwayo, kubalulekile ukuba usebenzisane kuluhlu lweendwendwe.
Kwiinyanga ezikhokelela kumtshato wakho, abantu abangafakwanga kuluhlu lwakho banokunyanzelisa ukuba balindele ukuya. Ngelixa kunokuziva kungonwabanga, kukho iindlela zokuba nembeko uxelele umntu ongamenywanga. Apha ngezantsi, siqaqambise izizathu ezahlukeneyo zokuba umntu angakhange afumane simemo, kunye nemizekelo yokuthini ukuba mabathini. Funda iincam zethu zokuphatha ngaphandle komthungo uluhlu lwencoko yeendwendwe njenge pro.
Isizathu: Iingxaki ze-COVID
Ukuba umtshato wakho uchaphazele ubhubhane wecoronavirus , AWUKHO wedwa. Unokucwangcisa ukuba ube nayo i-microwding okanye ubuncinci kude kube kukhuselekile kumbhiyozo omkhulu, ukunciphisa umda wabantu onokumema. Indawo entsha inokubonisa uluhlu lweeparameter uluhlu owawungenalo ngaphambili. Njengoko iinkcukacha zitshintsha, kubalulekile ukugcina iindwendwe zinolwazi malunga nezigqibo zakho.
Nyaniseka xa kuziwa kwiingxaki ze-COVID. Uninzi lweendwendwe luya kusiqonda isidingo sakho sokuhla, kwaye abayi kuyithatha buqu. Kodwa ukuba umntu uhlala ekuhlupha malunga noluhlu lwakho lwendwendwe olulungisiweyo, gcina impendulo yakho ilula kwaye inqaku. Fumana imizekelo yento oyithethayo apha ngezantsi. Kwaye ukuba ufuna uncedo oluthe vetshe lokuhamba kwi-coronavirus yoluhlu lweendwendwe zomtshato, sebenzisa isikhokelo sethu apha.
'Singathanda ukuba ubekhona emtshatweni wethu, kodwa sithathe isigqibo sokubamba indibano encinci ukulungiselela usapho olusondeleyo ukugcina wonke umntu ekhuselekile. Siyathemba ukuba siza kubhiyozela kunye nawe kungekudala! '
Sitshintshe isicwangciso sethu sokuqala somtshato ngenxa yesifo. Ngelishwa, oku kuthetha ukuba sithintele uluhlu lwethu lweendwendwe kusapho olusondeleyo. Siyabulela ukuqonda kwakho njengoko sihamba ngeli xesha! '
Ngelixa singenakho ukubamba wonke umntu ebesicwangcise yena ekuqaleni, siceba ukusingatha i ulwamkelo xa kukhuselekile ukwenza njalo kwaye ndingathanda ukuba ubhiyozele nathi ngelo xesha. Siza kwabelana ngolwazi oluthe kratya njengoko sikwazi ukuqinisekisa iinkcukacha. '
Isizathu: Bangumhlobo okude
Kuqhelekile ukuba abahlobo abakude kunye nabantu oqhelene nabo bafikelele emva kokuba nithembisene ngomtshato. Banokuphawula kwiifoto ze-Instagram okanye bathumele imiyalezo eneenjongo ezintle malunga nomtshato wakho ozayo, bebonisa umdla wabo wokufumana. Ngokuqinisekileyo banokuthetha kakuhle, kodwa incoko inokuba nzima xa ivakalelwa ngokungathi banxibelelana kuphela nesimemo somtshato wakho. Uya kuhlala ukwazi ukuxelela ukuba umntu unyanisekile kwiminqweno yabo elungileyo okanye ukuba bazama ukwenza indawo kuluhlu lweendwendwe zakho.
Xa ilixesha lokuba baxelele ukuba abamenywanga emtshatweni, bambelela kwinyaniso elula. Baxelele ukuba wonwabile ngokufikelela kuwe, kwaye unemincili yokubuyela kunxibelelwano. Zalisa ngobomi bakho okoko wagqibela ukuthetha kwaye ubabuze imibuzo malunga neyabo. Ukuba bayakubuza malunga nomtshato, baxelele malunga nohlahlo-lwabiwo mali kunye nezithintelo zendawo. Ukuba uyafuna ukuzibona, cebisa ukubamba ikofu okanye isidlo sangokuhlwa emva komtshato. Nazi ezinye zeendlela zokuhamba kule ncoko inamaqhinga.
'Kumnandi ukuva kuwe! Siyathemba ukuba uqhuba kakuhle okoko sagqibela ukubanjwa. Sigcina uluhlu lwethu lweendwendwe lilinganiselwe kumalungu osapho asondeleyo kunye nabahlobo abasenyongweni, kodwa singathanda ukukubamba emva komtshato. '
'Enkosi kakhulu ngeminqweno yakho elungileyo, oko kuthetha ukuba umhlaba uza kuthi. Sibambelele kuluhlu oluncinci lweendwendwe ngenxa yokunqongophala kwebhajethi, ke siyathemba ukuba niyakuqonda. Singathanda ukuthatha isidlo sangokuhlwa kunye nawe kungekudala.
'Kumnandi ukunxibelelana kwakhona! Ngenxa yendawo esikuyo sinoluhlu oluncinci lweendwendwe, kodwa siyayivuyela iminqweno yenu emihle. '
Isizathu: Bangumphathi okanye umntu osebenza naye
Ngokuqinisekileyo uza kubona umphathi wakho kunye nabantu osebenza nabo ngokungaguquguqukiyo ekhokelela kumtshato wakho. Banokubuza imibuzo malunga nenkqubo yakho yokucwangcisa kuba banomdla wokwenene, kwaye oku akuthethi ukuba bafuna isimemo. Kodwa njengokuba umhla wakho usondela, banokuqala ukubonisa ukuba bafuna ukuza. Akunyanzelekanga ukuba umeme nabani na emsebenzini, kodwa ungamema ukuba uyafuna- ngakumbi ukuba ngabahlobo abasenyongweni nabanye abantu osebenza nabo. Kwaye ukumema umntu omnye emsebenzini akuthethi ukuba umema wonke umntu.
Ngaphandle koku, kungcono ukuba uzilungiselele ngempendulo xa nawuphina umntu ecela isimemo. Njengakwiimeko ezininzi, ungalusola ngokulula uluhlu lwezithintelo kuhlahlo-lwabiwo mali.
'Njengokuba singathanda ukumema wonke umntu emtshatweni wethu, siyigcina isondele ngenxa yohlahlo-lwabiwo mali. Enkosi ngokuqonda! '
'Isithandwa sam kunye nam sixhasa ngokwethu umtshato, ke kufuneka sigcine uluhlu lweendwendwe ezincinci. Kodwa ndingathanda ukufumana iziselo emva komsebenzi ngenye imini ukubhiyozela nawe! '
Indawo yethu inomda ongqongqo wamandla, kungoko sigcina uluhlu lweendwendwe lusikelwe umda kusapho lwethu nakwizihlobo ezisondeleyo. Ndingathanda ukubhiyozela kunye nawe ngelixa elimnandi! '
Isizathu: Zizalamane ongasondelanga kuzo
Kunokuba nzima ukuhamba kuluhlu losikelo lwendwendwe xa kufikwa kumalungu osapho. Ngelixa ungangasondeli kwisihlobo, ukubamema kunokuthetha lukhulu kubazali bakho okanye kumalungu osapho lwakho. Ngelixa kungafanelekanga ukuba uzive unyanzelekile ukumema umntu ongasondelelananga naye, kubalulekile ukuba uthethe ngayo nge-SO yakho. nabazali bakho.
Chaza isizathu sokuba ungabafuni emtshatweni wakho. Ngaba bekukho ukungavisisani? Awukhe uthethe okomzuzwana? Ngaba bangamalungu osapho anetyhefu? Gcina incoko yakho inyanisekile kwaye inyanisekile, kwaye uvulele ukuphulaphula oko abazali bakho bathethayo. Thetha phandle ukuba uhlahlo-lwabiwo mali luyinto yokwenene — okanye ukuba awubafuni emtshatweni wakho, thetha inyani. Mamela igalelo labazali bakho, ngakumbi ukuba banceda ukuhlawula umtshato. Ukuba uthatha isigqibo sokungamemi ilungu losapho, lungiselela impendulo xa kunokwenzeka bacele isizathu.
'Sizihlawulela ngokwethu umtshato, ke asinakukwazi ukumema wonke umntu. Siyayibulela ingqiqo yakho. '
Indawo yethu inendawo encinci yeendwendwe, ke sigcina umtshato usondele kakhulu. Siyathemba ukuba uyaqonda. '
uthini umahluko phakathi kwetax nesuti
'Njengokuba singathanda ukumema wonke umntu, silandela uhlahlo-lwabiwo mali olungqongqo. Enkosi kakhulu ngokuqonda kwakho. '
Isizathu: Awubafuni emtshatweni wakho
Ngamanye amaxesha, awufuni abantu abathile emtshatweni wakho. Ungangabinaso isizathu esicacileyo ngaphandle kwento yokuba awukufuphi okanye awubafuni apho. Le ncoko inokuba yinkohliso ukuba wena kunye ne-S. ayinguwe wedwa ohlawula umtshato. Khumbula ukuba ukuba abazali bakho okanye abasebukhweni banegalelo, kubalulekile ukuba basebenze kunye ekwenzeni uluhlu londwendwe. Ukuba uzifumana ukule meko apho umntu othile ekuhlupha malunga nesimemo sakhe, gcina impendulo yakho ithobekile kodwa yomelele.
'Ngenxa yohlahlo-lwabiwo mali oluxineneyo, umtshato wethu ugcina umncinci-kodwa singathanda ukukubamba emva koko.'
Indawo yethu inomda ongqongqo wokusebenza, ngenxa yoko asikwazi ukumema wonke umntu. Siyayibulela ingqiqo yakho! '
'Sizihlawulela ngokwethu umtshato, ngoko ke asikwazi ukumema abantu abaninzi ngendlela ebesilindele ngayo. Ndiyabulela ngokuqonda kwakho! '
Senze isigqibo sokugcina uluhlu lwethu lweendwendwe lilinganiselwe kumalungu osapho kunye nabahlobo abasondeleyo. Siyathemba ukuba uyaqonda! '
Iofisi eyakhiwe ngaphakathi
zithini iindleko eziphakathi komtshato
gala ngexabiso le-galia lahav
indlela tie isikwere
Iivesi zebhayibhile malunga nokuthanda umyeni wakho